Hawaii Tourism na-eme atụmatụ maka Maui, Molokai na Lanai | Business Travel Akụkọ
Home » Business Travel Akụkọ » Hawaii Tourism na-eme atụmatụ maka Maui, Molokai na Lanai
Hawaii Tourism na-eme atụmatụ maka Maui, Molokai na Lanai
Dịka akụkụ nke atụmatụ njem nlegharị anya nke obodo, Hawaii Tourism Authority bipụtara atụmatụ ime ihe iji jikwaa njem nlegharị anya na ihe a maara dị ka Maui Nui nke gụnyere agwaetiti Maui, Molokai, na Lanai.
Atụmatụ ime ihe na-aga ebe aga-eduzi ga-abụ ntụzigharị iji wughachi, gbanwee, ma tọgharịa ụzọ nke njem na agwaetiti atọ mejupụtara Maui Nui.
Mgbado anya dị na omume ndị obodo, ụlọ ọrụ ndị ọbịa, na ngalaba ndị ọzọ chere na ọ dị mkpa maka afọ atọ.
Omume dabere na ogidi mkparịta ụka anọ - Natural Natural, Hawaiian Culture, Community, na Brand Brand.
Hawaii Tourism Authority (HTA) ebipụtawo 2021-2023 Maui Nui Atụmatụ Atụmatụ Atụmatụ (DMAP). Ọ bụ akụkụ nke ọhụụ HTA na mbọ na-aga n'ihu iji jikwaa njem nleta n'ụzọ dị mkpa na usoro. Ọ bụ ndị bi na Maui, Molokai na Lanai mepụtara ya, yana mmekorita ya na County nke Maui na Maui Visitors and Convention Bureau (MVCB). DMAP bụ ntụzịaka iji wughachi, kọwaa ma tigharịa ụzọ nke njem na agwaetiti atọ mejupụtara Maui Nui. Ọ na-egosipụta mpaghara nke mkpa yana ihe ngwọta maka ime ka ndụ ndị bi na ya dịkwuo mma ma melite ahụmịhe ndị ọbịa.
“Ekele niile dịịrị ndị Lanai, Molokai na Maui ndị nyefere onwe ha na usoro DMAP ma dị njikere ịnagide nsogbu siri ike, nabata echiche dịgasị iche iche, nyochaa echiche ọhụrụ ma chọpụta ihe ndị kacha mkpa. Usoro DMAP na-enye usoro nkwado nke a na-akpali ndị sonyere 'malama' - ilekọta, lekọta ma kpuchido ebe na ọdịnala kachasị amasị ha, "ka John De Fries, onye isi oche na onye isi oche HTA kwuru.
Atụmatụ obodo ahụ na-elekwasị anya na isi omume ndị obodo, ụlọ ọrụ ndị ọbịa na mpaghara ndị ọzọ chere na ọ dị mkpa maka afọ atọ. Ntọala nke Maui DMAP dabeere na HTA 2020-2025 Atụmatụ Atụmatụ. Omume ndị a dabere na ogidi mmekọrịta anọ nke HTA's Strategic Plan - Natural Resources, Hawaiian Culture, Community and Brand Marketing.
Mejuputa atumatu oru nkwukọrịta ahia nke ndi njem iji kuziere ndi ọbịa nleta na mbata na mbata banyere njem na nkwanye ugwu.
Bido, tinye ego ma gaa n'ihu na mmemme iji kpuchido ahụike nke oke osimiri, mmiri dị mma na gburugburu ebe obibi na nchekwa nchekwa ndụ.
Nọgide na-abịakwute obodo iji ghọta echiche obibi, mụbaa nkwukọrịta nye ndị bi, ma kwalite mmekorita.
Nọgide na-enye mmemme agụmakwụkwọ na mmemme ọzụzụ iji bulie ma dịgide aloha, malama na kuleana na ezigbo ahụmahụ Hawaii.
Zụlite mmegharị njem nlegharị anya.
Zụlite ma kwalite atụmatụ iji melite ahụmịhe njem na njem ala.
Gbaa mbọ hụ na ndị ọzọ bara uru site na njem.
Ndi HTA na ndi ime obodo na akwado maka itinye aka na iwu na agha na oganihu banyere mmanye.
Zụlite mmemme nkwukọrịta na agụmakwụkwọ iji kwalite omume ị na-ahụ ndị ọbịa.
Kwado uto nke azụmaahịa Molokai site na ịgba ume mmepe ngwaahịa ọhụụ lekwasịrị anya na njem nlegharị anya, ebe ị na-aga n'ihu na-eme njem nlegharị anya ọdịnala, iji mụbaa ọrụ maka ndị bi na ya.
Na-akwalite Molokai iji dọta kamaaina na ngalaba ndị ọbịa na-enwe ekele maka ma ghọta ụdị ndụ Molokai.
Mee ka ndị ọbịa na-eme ka mmekọrịta nke ndị ọbịa sikwuo ike site na iwusi nzukọ na omume ndị metụtara obodo / obodo ike.
Nye ulo nke na-egbo mkpa nke ngalaba a chọrọ.
Soro ndi ozo choro ichota uzo nke gha eme ka ndi njem na ndi ozo bia.
Zụlite mmekọrịta na mmemme na ebe ntụrụndụ na azụmaahịa ndị njem ndị ọzọ iji melite ma melite mmekọrịta obodo.
Emeziwanye ma gbaa ume iji Lanai Culture & Heritage Center's (LCHC) Guide App dị ka akụkụ bụ isi nke usoro njem maka ịga agwaetiti ahụ.
Gbaa omume ndi njem nlegharị anya na Lanai.
Na-akwado Lanai City ịbawanye mmefu nke ndị bi na obere azụmaahịa na-aga.
Gbaa ndị ọbịa ume ma mee ka ha nwee ike ịhazi ụbọchị ma ọ bụ nọrọ na Lanai nke metụtara ala, ndị mmadụ na ibi ndụ na Lanai.
Zụlite ma mejuputa usoro nke ndị ọbịa na Lanai kwenyere iji chebe, ịkwanyere, na ịmụ banyere Lanai ọdịbendị na akụ ndị sitere n'okike, yana ndị obodo n'oge nleta ha site na nkwa Malama Maui County.
Gbaa ụlọ ọrụ na-eme ihe omume ịhapụ ịhapụ ndị ọbịa na-eji osimiri na ụlọ ọrụ Lanai eme ihe na-enweghị ntinye aka na ndozi nke osimiri na akụrụngwa.
Kụziri ndị ọbịa ihe omume na ihe omume dị na Lanai bụ ndị gbadoro anya na ọdịbendị na akụ na ụba, nke nwere ike ịgụnye mweghachi azụ azụ, ịkụ osisi osisi, wdg
Omume ndị a bụ ndị kọmitii na-ahụ maka Maui, Molokai, na Lanai mepụtara, gụnyere ndị bi na-anọchite anya obodo ha bi na ya, yana ụlọ ọrụ ndị ọbịa, ngalaba azụmahịa dị iche iche, na ndị otu na-anaghị akwụ ụgwọ, na ntinye obodo. Ndị nnọchite anya si County nke Maui, HTA, na MVCB nyekwara ntinye na usoro ahụ dum.
“Onyinye zoro ezo nke COVID-19 bụ na o nyere onye ọ bụla nọ na Hawaii ohere ịkwụsịtụ na ịtụle ọrụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ ile ọbịa anyị. Site na isoro ndị mmekọ gburugburu ebe obibi, ndị ọkachamara n'ọdịbendị, na ndị ọzọ metụtara ya, kọmitii na-ahụ maka Maui, Lanai na Molokai nwere ike itinye echiche pụrụ iche maka ndị agwaetiti ha. Ana m atụ anya iso ndị kọmitii na-ahụ maka atụmatụ Maui Nui Destination Management Action Plan na Hawaii Tourism Authority na-akwado nkwado ha iji mezuo ihe omume a, "Onye isi obodo Maui County Michael Victorino kwuru.
Usoro Maui Nui DMAP malitere na July 2020 wee gaa n'ihu na usoro nzukọ kọmitii na-achịkwa, yana nzukọ ọgbakọ atọ dị na October na Nọvemba.
“Oge nke Maui Nui DMAP karịrị serendipitous. Dika ihe ojoo dika COVID-19 si diri obodo anyi na aku na uba anyi, o nyere anyi 'kwusi' anyi choro n'ezie iji weghachite uzo iji weghachite njem nlegharị anya n'ụzọ echebara echiche. Ndị na-eketa oke na Maui County na ndị otu obodo na-etinye ọtụtụ echiche na mkparịta ụka n'ime atụmatụ a na imepụta ihe ndị nwere ike ime. Enwere m obi ụtọ maka atụmatụ anyị gbakọtara ọnụ ma na-atụ anya na ọrụ a ga-aga n'ihu ka anyị na-abanye n'ime ihe ahụ, "Lisa Paulson, onye na-ahụ maka ndị obodo maka ndị isi obodo Maui County kwuru.
Ndị otu kọmitii nchịkwa Maui bụ:
Seward Akahi (Onye isi njikwa, Hertz)
Rod Antone (Executive Director, Maui Hotel na odlọ Ọrụ Association)
Matt Bailey (Onye isi nchịkwa, Montage Hotel)
Kathleen Costello (Ebe njedebe Diva, Wailea Resort Association)
Toni Davis (Executive Director, Ihe na-adọrọ mmasị Association nke Hawaii)
Jim Diegel (Chief Strategy Officer, Maui Ahụike)
Sherry Duong (Onye isi nchịkwa, Maui Visitors and Convention Bureau)
Kawika Freitas (Ahịa / Onye na-enye ọzụzụ, Old Lahiana Luau)
Hokulani Holt-Padilla (Onye isi oche, Ka Hikina O Ka La, Mahadum nke Hawaii Maui College)
Kyoko Kimura (Onye otu HTA Board, Aqua-Aston Hospitality)
Marvin Moniz (Onye isi ụgbọ elu, Ngalaba ationgbọ njem)
Jin Prugsawan (Ọfịs Ọhaneze Ọhaneze / Chief nke Nkọwa na Mmụta, Haleakala National Park)
Anne Rillero (Nkwukọrịta Obodo, Maui Nui Marine Resource Council)
Andrew Rogers (Onye isi njikwa, Ritz Carlton)
Pamela Tumpap (ụlọ Maui nke Azụmaahịa)
Pomai Weigert (Onye na-ahụ maka AgBusiness, GoFarm Hawaii)
John White (Director nke Ahịa, Kaanapali Beach Hotel)
Brian Yano (Onye isi njikwa, letslọ ahịa nke Maui)
“Enwere m obi ekele na enyere m ohere itinye echiche dị iche iche banyere ichebe oke mmiri oke osimiri Maui, oke mmiri coral na anụ ọhịa mmiri maka Maui Nui Destination Management Plan Plan. Ana m ekele gị HTA maka ịgbakọta ọrụ a na-arụkọ ọrụ ọnụ ma debe ya ka ọ na-arụpụta ma tinye ya, n'agbanyeghị na anyị enweghị ike izute onwe anyị n'ihi COVID-19, Onye otu Kọmitii na Maui na-ahụ maka nlekọta.
Ndị otu kọmitii nchịkwa Molokai bụ:
Julie-Ann Bicoy (Otu Obodo)
Kanoelani Davis (Onye nwe ya, Pomahina Designs)
Ui Kahue (Onye Nwe Azụmaahịa)
Clare Mawae (Onye isi oche na Ntorobịa Na Motion, Onye Nwe Molokai n’èzí na CSM Management)
John Pele (Onye Mmekọ na Onye Nchịkwa, Hiro's Ohana Grill na Paniolo Hale)
Greg Solatorio (Halawa Ndagwurugwu Falls Omenala njem)
Rob Stephenson (Onye isi ala, ụlọ ọrụ Molokai)
“Site na mmekorita di egwu ma na-agbakwunyere atumatu anyi n’ime mmepe nke 2021-2023 Maui Nui DMAP, anyi kwenyesiri ike na iga n’ihu n’obodo anyi na ndi oru mmekorita anyi ga - ahu ezigbo mgbake Site na afọ atọ na-esote, MVCB na-atụ anya iso ndị obodo Maui Nui na-arụ ọrụ iji kọwaa ma tọgharịa usoro nke njem, wee wughachi akụ na ụba anyị, "ka Sherry Duong, onye isi oche nke Maui Visitors and Convention Bureau na onye otu Maui kwuru. Molokai, na Lanai na-ahụ maka kọmitii.
Ndị otu kọmitii na-ahụ maka nlekọta Lanai bụ:
Nelinia Cabiles (Onye nchịkọta akụkọ, Lanai Taa)
Bill Caldwell (Onye isi ala, ụgbọ njem)
Kathy Carroll (Onye nwe, Mike Carroll Gallery)
Dr. Keiki-Pua Dancil (Onye isi osote onye isi ala, Gọọmentị na atụmatụ atụmatụ, Pulama Lanai)
Lisa Grove (Onye isi na Grove Insight and Farmer at Ola Kamoku Farm)
Alberta De Jetley (Onye Otu Obodo)
Gabe Lucy (Onye isi oche, njem njem atọ / Lanai Ocean Sports)
Alastair McAlpine (Onye isi njikwa, oge anọ Lanai)
Diane Preza (Director nke mmepe obodo, Pulama Lanai)
Shelly Preza (Ọkachamara Nchịkwa Nchịkwa, Lanai Culture & Heritage Center)
Stan Ruidas (Onye otu obodo)
"Dịka onye nwere obere azụmaahịa na Lanai ruo afọ iri na itoolu, e wedara m ala ma kwanyere ya ugwu ka m wee rụọ ọrụ na-enyere aka ịhazi atụmatụ nke na-achọ ịmanye agwaetiti ahụ ma jiri nkwanye ugwu kwalite njem nlegharị anya," ka Kathy Carroll, onye nwe Mike Carroll Gallery na kwuru. Lanai onye isi oche.
Maui Nui DMAP dị na weebụsaịtị HTA:
Hawaii Island DMAP na-agwụcha maka nkesa ọha, yana usoro DMAP Oahu na-atụ anya ịmalite ọnwa a. E bipụtara Kauai DMAP na mbido ọnwa Febụwarị ma ọ dị na weebụsaịtị HTA: https://www.hawaiitourismauthority.org/media/6487/hta-kauai-dmap.pdf
Iji mụtakwuo maka mmemme mmemme njem nleta nke HTA na ịgbaso ọganihu nke ndị DMAPs: www.hawaiitourismauthority.org/what-we-do/hta-programs/community-based-tourism/